Counter Strike 1.6 ဒေါင်းလုပ် Counter-Strike 1.6 website ကို download လုပ်ပါ
Counter-Strike 1.6 ၎င်းသည်စွန့်စားမှုနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်တို့နှင့်ပြည့်နေသောကြောင့်စိမ်းလန်းသောကမ္ဘာမြေတွင်လူကြိုက်အများဆုံး၊ ပျော်ရွှင်စရာနှင့်ကျယ်ပြန့်စွာဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် download လုပ်သူတိုင်း၏အိပ်မက်ဖြစ်သည် CS 1.6 သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာများတွင်အခမဲ့ သုံး၍ ရန်ပွဲကိုစတင်ပါ။ နိုင်ငံခြားဖိုင်အမျိုးအစားမျိုးစုံမှသင့်တော်သောအခမဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သည် CS 1.6 ၎င်းသည်လွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းသောအလုပ်မဟုတ်ပါ။ သင်ကဂိမ်းကစားတာကို ၀ ါသနာပါတယ်ဆိုရင် counter-strike 1.6 အခမဲ့ download လုပ်ပါ၊ ထို့နောက်သင်သည်နေရာမှန်၌ရှိနေသည်။ အခမဲ့ပို့ဆောင်ခကိုရှာဖွေရန်သင်ဤသို့သွားရန်မလိုပါ CS 1.6မရ။ ငါတို့ကမင်းကို download လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတွေပေးထားတယ် CS 1.6 အခမဲ့။
ဤဆိုဒ်၌ဗားရှင်းအားလုံးကိုသင်အလွယ်တကူ download လုပ်နိုင်သည် Counter-Strike 1.6 အလကား။ ဟုတ်သည်၊ ၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဗားရှင်းအပြည့်အစုံကို download လုပ်လိုက်ပါ CS 1.6 အပေါ်မှ download ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် setup ကို ၀ ယ်ရန်ငွေကြေးမသုံးဘဲဂိမ်းကိုပျော်ပျော်ကစားပါ CS 1.6 သို့မဟုတ်ကစားသူအများအပြား အခမဲ့ CS 1.6 download များပေးနိုင်သောအခြား ၀ က်ဘ်ဆိုက်များစွာကိုသင်တွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မည်၊ သို့သော်၎င်းတို့အများစုသည်သင်၏ကွန်ပျူတာကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေမည့် junk ဖိုင်များနှင့်အတူဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ရှုပ်ထွေးသောနည်းလမ်းများရှိသည်။ ဤစာမျက်နှာတွင်ဂိမ်း CS 1.6 ၏မူရင်းမိတ္တူနှင့်သင်၏ကွန်ပျူတာသို့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြသည်။ ထို့အပြင်ငါတို့သည်မလိုအပ်သောဖိုင်များကိုဖယ်ရှားပြီးရိုးရှင်းလွယ်ကူစေရန် CS 1.6 ၏အရွယ်အစားကိုလျှော့ချလိုက်သောကြောင့်သင်၏ PC သို့ဂိမ်းကိုထိခိုက်စေမည့်အပိုဖိုင်တွဲများနှင့်အစီအစဉ်များမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် download လုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုပေးရုံတင်မကပါဘူး CS 1.6 အခမဲ့ဖြစ်သည်၊ ဒါပေမယ့်လည်းဒီဂိမ်းအကြောင်းအသစ်ကစားသူအသစ်များသို့မဟုတ်လူသစ်များအားလမ်းညွှန်မှုနှင့်သတင်းအချက်အလက်များပေးခဲ့သည် Counter-Strike 1.6မရ။ သင် download လုပ်နိုင်ရန် csdownload.net၊ web page တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးခဲ့သည် CS 1.6 ဂိမ်းကိုသင်၏ PC သို့လွယ်လွယ်ကူကူ download လုပ်၍ install လုပ်ပြီးကစားပါ CS 1.6.
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုအခမဲ့နှင့်ရေနွေးငွေ့မဟုတ်သောဗားရှင်းကိုပေးသည် CS 1.6 အလွန်မြန်သော download speed၊ နောက်ဆုံးပေါ် compressions နှင့် instillation algorithms ပါသော download၊ သင် download လုပ်ပြီး install လုပ်နိုင်လိမ့်မည် CS 1.6 Windows (XP, 7, 8, 8.1, and 10) အားလုံးအတွက်ဗားရှင်းများနှင့်ထုတ်ဝေမှုအားလုံး၊ အမှား၊ အမှားများ၊
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန် Counter-Strike 1.6 အလကား?
ဒေါင်းချင်ရင် Counter-Strike 1.6 ဂိမ်းကိုအခမဲ့ရသော်လည်းသင်မည်သို့ download လုပ်ရမည်ကိုမသိပါ CS 1.6 PC ၌သင်လိုအပ်သည်ထက်၎င်းကိုစိတ်မပူပါနဲ့၊ ငါတို့ကမင်းကိုကူညီဖို့ဒီမှာပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုအပြည့်အဝ download အခမဲ့ဗားရှင်းကိုဆက်ကပ် CS 1.6 ဂိမ်း။ ငါမင်းကိုအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ download link တစ်ခုပေးထားတယ် CS 1.6 ကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှ၎င်းကိုသင် download လုပ်နိုင်ရန်ဤ website တွင် download လုပ်ပါ။ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲဖို့အတွက်တင်တယ် CS 1.6သင်ရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူသောအဆင့်အနည်းငယ်ကိုလိုက်နာရန်သာလိုသည်။ အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသင်နားလည်နိုင်ရန်အောက်ပါလမ်းညွှန်ချက်များကိုဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ CS 1.6
ထို့နောက်အခမဲ့တည်ဆောက်မှုကိုသင်သိမ်းဆည်းလိုသောသင်၏ကွန်ပျူတာရှိတည်နေရာကိုရွေးပါ CS 1.6
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာလိမ့်မည် CS 1.6 website မှသင်၏ကွန်ပျူတာသို့ download speed သည်အင်တာနက်အမြန်နှုန်းပေါ်မူတည်သည်။
သင် installation ဖိုင်ကို download လုပ်ပါ CS 1.6 ပြီးသွားလျှင် configuration ကိုသင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသော folder သို့သွားပါ
configuration file ကိုနှိပ်ပါ CS 1.6 ၎င်းကိုသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် install လုပ်ပါ။
တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးပါက finish ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ
သင်အောင်မြင်စွာဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးပါပြီ CS 1.6 အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ယခု၎င်းကိုဖွင့်ပြီးဂိမ်းကိုခံစားပါ။
အရင်တုန်းကလူတွေကဒေါင်းလုပ်အတွက်ပိုက်ဆံပေးရတယ် Counter-Strikeယခုမူချွင်းချက်မရှိဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အခမဲ့ download လုပ်ပါ CS 1.6; ဤအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပထမအမျိုးအစားသေနတ်ပစ်ဂိမ်း၏ဗားရှင်းများနှင့်ထုတ်ဝေမှုအားလုံးကိုသင်အလွယ်တကူ download လုပ်နိုင်သည်။ သင်အပါအဝင်ကွဲပြားသောဗားရှင်းများကိုရှာဖွေနေသည် Counter-Strike 1.6 CSGO စာစောင်၊ Counter-Strike: ဟယ်လိုမုဒ်၊ CS 1.6 မူရင်းဗားရှင်း၊ CS 1.6: PROCS RAR ဗားရှင်း၊ CS 1.6: XTCS ဗားရှင်း၊ Counter-Strike 1.6 ခေတ်သစ်ပုံစံ (သို့) အခြားဗားရှင်း (သို့) ထုတ်ဝေမှု၊ သင်သည်ဤ web page မှအကန့်အသတ်များနှင့်အခြားအဆင်မပြေမှုများမပါဘဲ၎င်းကိုသင် download နိုင်သည်။ အခမဲ့ download ခလုတ်၏မည်သည့်ဗားရှင်းကိုမဆိုနှိပ်ပါ CS 1.6 မင်းရဲ့ကွန်ပျူတာမှာဂိမ်းတစ်ခုရဖို့ဒီ web page မှာ malicious script များနှင့်ဖိုင်များကိုအလကား download လုပ်ချင်သည်။
ဗားရှင်းအားလုံး Counter-Strike (CS 1.6 Warzone၊ CS 1.6 original, final XTCS, CS: GO mode, Source edition etc) သည် Microsoft ဗားရှင်းအားလုံးနှင့်တွက်ချက်နေပြီး Window 95, Window 98, Window 2000, Window 7, Window 8, Window 8.1, Windows XP, Window 10 စသည်ဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဝေး။ Window မှလွဲ၍ အခြားမည်သည့် operating system ကိုမဆိုသုံးလျှင်၊ သင်ဂိမ်းကစားရန်နှင့် Microsoft ကစားနေစဉ်မည်သည့်အမှားများ၊ သင့်ရဲ့ PC မှာ Microsoft operating system ရှိပြီးသားဆိုရင်သင်မျှော်လင့်ထားတာထက် download link link ကိုနှိပ်ပါ Counter-Strike 1.6 ကျွန်ုပ်တို့၏ website တွင်အခမဲ့ ရယူ၍ သင်၏ CS: 1.6 ကိုအခမဲ့ download ရယူပါ။
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ CS 1.6 ကျွန်ုပ်တို့၏ website မှအခမဲ့၊ ကစားရန်အကြံပြုထားသောအနည်းဆုံးကွန်ပျူတာစနစ်လိုအပ်ချက်များအကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သည် Counter-Strike 1.6 ဂိမ်း။ ၎င်းသည်ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်တွက်ချက်နေသောကွန်ပျူတာစနစ်ဖြစ်သည် CS 1.6 မည်သည့်နှောင့်နှေးမှု၊ အနှောင့်အယှက်မှမရှိဘဲကစား။ ကစားပါ။ သင်ဤအကြောင်းကိုမသိလျှင်၊ ဂိမ်းကိုအခမဲ့တပ်ဆင်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်စိတ်ပူစရာမလိုပါ Counter-Strike 1.6 အနည်းဆုံးကွန်ပျူတာအရင်းအမြစ်များလိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်မြင့်မားသောဂရပ်ဖစ်ကတ်များနှင့်ကွန်ပျူတာတစ်လုံး၏ထူးခြားသောသတ်မှတ်ချက်များလိုအပ်သောခက်ခဲသောဂိမ်းမဟုတ်ပါ။ exe ဖိုင်အရွယ်အစား CS 1.6 ၎င်းသည်ကွန်ပျူတာ hard drive ၏ ၂၅၀ MB သာလိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်သေးငယ်ပြီး၎င်းသည်သင်အခမဲ့ download လုပ်သောအခါသင်၏ကွန်ပျူတာ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တိုးတက်မှုကိုမထိခိုက်စေပါ Counter-Strike 1.6 ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ။ သို့ရာတွင်ဒေါင်းလုပ်မချမီကွန်ပျူတာတစ်လုံး၏အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်များအကြောင်းကိုသိရန်အရေးကြီးသည် CS 1.6 အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ကစားခဲ့လျှင် CS 1.6 သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်နှောင့်နှေးမှုမရှိဘဲ၊ သင်၏ကွန်ပျူတာ၌အနည်းဆုံးလိုအပ်သောသတ်မှတ်ချက်များရှိသည်နှင့်သင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်နှင့်ကစားရန်အခက်အခဲများရှိလျှင်ဆိုလိုသည်။ CS 1.6 မင်းရဲ့ pc က free download လုပ်ဖို့တွက်ချက်နေလားဆိုတာသိဖို့အောက်ကလိုအပ်တဲ့ specification တွေကိုစစ်ဆေးဖို့လိုတယ် CS 1.6 ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ပါ။ အတွက်အနည်းဆုံးကွန်ပျူတာသတ်မှတ်ချက်များ CS 1.6 CPU: 0.8 GHz, အခမဲ့ Hard Disk Drive-650 MB, Random Access Memory (RAM)- 128 MB
သင် download လုပ်ပြီးကစားရန်အင်တာနက်လိုင်းကောင်းကောင်းရှိရန်လိုအပ်သည် CS 1.6 ကွန်ပျူတာထဲမှာ
ဂိမ်းတွင်ပျော်မွေ့ရန်သင်၏ကွန်ပျူတာတွင် 512 MB RAM (သို့) ထိုထက်မကရှိသင့်သည်။
သင့်ကွန်ပျူတာထဲမှာအနည်းဆုံး 750 MB hard disk ရှိရမည်
128 MB ဗီဒီယိုကဒ်ကိုသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ထားသင့်သည်
အဘယ့်ကြောင့် download လုပ်သင့်သနည်း Counter-Strike 1.6 ကျွန်ုပ်တို့၏ site မှ
သက္ကရာဇ်အစတွင်၎င်းကိုပထမဆုံးစတင်ထုတ်လုပ်သောအခါ၊ CS 1.6 လူအများအပြားအတွက်အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်မရသော်လည်းအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ developer များကတိုးတက်လာသည် Counter-Strike 1.6 non-steam 1.6 free game setup file ကိုစတင်တီထွင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ယခုအခါအခမဲ့ download ရယူနိုင်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များစွာကိုသင်တွေ့နိုင်သည် CS 1.6 ဂိမ်း။ CS game ချစ်သူများအတွက်သူတို့အလွယ်တကူ download လုပ်နိုင်သော website တစ်ခုကိုရှာရန်မှာခက်ခဲသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည် Counter-Strike 1.6 အန္တရာယ်ရှိသောဗိုင်းရပ်စ်များ၊ ဖိုင်များ၊ လင့်ခ်များ၊ ကြော်ငြာများသို့မဟုတ်အခြားမလိုအပ်သောဖိုင်များမပါဘဲအခမဲ့ဖြစ်သည်။ download လုပ်ဖို့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ web page ကိုရှာရမယ် Counter-Strike 1.6မရ။ အခမဲ့ download ရယူနိုင်သော site အများစု Counter-Strike 1.6 ဂိမ်း၏တိုးတက်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလွှမ်းမိုးရုံမကနိုင်ငံခြားဖိုင်အမျိုးအစားမျိုးစုံရှိသည် CS 1.6ဒါပေမယ့်သူတို့ကမကောင်းတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တွေကြောင့်မင်းရဲ့ system ကိုထိခိုက်စေတယ်လေ
ငါတို့ website တွင် https://csdownload.netနောက်ဆုံးပေါ် configuration file CS download 1.6 ကိုသင်အခမဲ့တွေ့ရလိမ့်မည်။ ငါ link တစ်ခုပေးထားတယ် CS 1.6 အလွန်အန္တရာယ်ရှိသောဖိုင်များအားလုံးမှအလွန်အကာအကွယ်ပေးပြီးအခမဲ့ဖြစ်သောသင်အတွက် download လုပ်ပါ။ Cs 1.6 ကျွန်ုပ်တို့၏ site ၏ client သည်ကျွန်ုပ်တို့သိထားသောနှေးကွေးသော hack နည်းလမ်းနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ site csdownload.net မှ download လုပ်နိုင်သည် CS 1.6 မကောင်းသောဖိုင်များနှင့် script များကိုခိုင်မာစွာကာကွယ်ခြင်းနှင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်းဖြင့် Counter-Strike ကျွန်ုပ်တို့၏စာမျက်နှာကို ၀ င်တိုက်ပါကမည်သည့်ဗိုင်းရပ်စ်မှမကူးစက်နိုင်ပါ။
ထို့အပြင်သင်ထုတ်ဝေသောအဟောင်းနှင့်အသစ်ထုတ်ဝေမှုအားလုံးကိုသင် download လုပ်နိုင်သည် Counter-Strike 1.6 ဒီ website ကနေ ထုတ်ဝေမှုအသစ် Counter-Strike 1.6 XTCS ဗားရှင်း၊ Counter-Strike 1.6: မူရင်းဗားရှင်း၊ Counter-Strike 1.6 PROCS ဗားရှင်း၊ CS: GO Edition စသည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ website တွင်ရနိုင်သည်။ ဒီဆိုဒ်အတွက်ကောင်းတဲ့ link တွေကိုသင်အလွယ်တကူရှာနိုင်ပါတယ်။ မင်းတကယ်စိတ်ထက်သန်တယ်ဆိုရင် CS 1.6 download ဘာကိုစောင့်နေတာလဲ။ ပေးထားသော cs download ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ ဂိမ်းကို download လုပ်ပြီးသူငယ်ချင်းများနှင့်သူစိမ်းများနှင့်ကစားခြင်းကိုပျော်မွေ့ပါ။
ဘာကြောင့်လဲသိလား CS 1.6 လူကြိုက်အများဆုံး CS download game လား။
CS 1.6 ဗားရှင်း Counter-Strike ၎င်းတွင်ထူးခြားမှုနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းစေသောဆွဲဆောင်မှုရှိသောအင်္ဂါရပ်များနှင့် features များစွာပါ ၀ င်သောကြောင့်နာမည်ကြီးသည် Counter-Strikeမရ။ ဤဗားရှင်း Counter-Strike ၎င်းကိုကစားသမားများ၏စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်သာမန်လူထုအတွက်ပရိုဂရမ်မာများကအထူးတီထွင်ထားသည်။ Counter Strike ၎င်းတွင် multiplayer နှင့် single-player modes နှစ်ခုလုံးရှိသည်။ developer များသည်နည်းဗျူဟာအရမီးပွားများ၊ crosshairs များနှင့်စနိုက်ပါများပါ ၀ င်သောအမှတ်တံဆိပ်ဗားရှင်းအသစ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
ကစားသူများသည်ဗားရှင်းအသစ်တွင်ဓားများ၊ ရိုင်ဖယ်များ၊ ခန္ဓာကိုယ်ချပ်ဝတ်တန်ဆာများ၊ လက်ပစ်ဗုံးများ၊ စက်သေနတ်များနှင့်ဗုံးရှင်းလင်းရေးကိရိယာများအပါအ ၀ င်ကွဲပြားခြားနားသောနောက်ဆုံးပေါ်လက်နက်များရနိုင်သည်။ CS 1.6မရ။ ကစားသမားများသည်ဂိမ်း ၀ င်ငွေနှင့်ဂိမ်းလိုအပ်ချက်အရလက်နက်များ ၀ ယ်နိုင်သည်။ ဤလက်နက်များသည်တကယ့်စစ်ပွဲတစ်ခုအတွက်သုံးသောတကယ့်လက်နက်များနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်၊ ထို့ကြောင့်ဤလက်နက်များသည်အေးမြသောအသံနှင့်ကစားသမားများကိုဆွဲဆောင်သည်။
ဗားရှင်းအသစ်များ Counter-Strike သူတို့မှာအရည်အသွေးမြင့်ဂရပ်ဖစ်၊ ပုံစံကောင်း၊ dynamic textures နဲ့အသံတွေရှိတယ်။ မြေပုံများ CS 1.6 အခြားမည်သည့်ဗားရှင်းထက်မဆိုများစွာပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတိုးတက်လာသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာ၊ CS 1.6 ဆေးများသည်ခက်ခဲသောကွန်ပျူတာစနစ်တစ်ခုဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါ၊ ၎င်းသည်ခက်ခဲသောကစားနည်းတစ်ခုမဟုတ်သောကြောင့်မည်သည့်ကွန်ပျူတာစနစ်နှင့်မဆိုဂိမ်းကိုလွယ်ကူစွာလည်ပတ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် Microsoft Windows ဗားရှင်းအားလုံးနှင့်လိုက်ဖက်သည်။
ထိုမျှသာမက၊ Counter-Strike ၎င်းသည်၎င်းတို့အားနေ့စဉ်ဘ ၀ ၌သူတို့၏ပြဿနာများကိုမေ့ပျောက်စေပြီးဂိမ်းကစားနည်းလောက၏မတူကွဲပြားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများအားကျော်ဖြတ်ရန်ကူညီသည်။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးပြန်ဖွင့်ပါ CS 1.6 သူငယ်ချင်းများနှင့်သူစိမ်းများနှင့်အတူအပျက်သဘောဆောင်သောအတွေးများကိုဖယ်ရှားပေးပြီးလူတို့အားသူတို့ကိုယ်သူတို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်ပျော်ရွှင်စရာအခွင့်အလမ်းကိုပေးသည်။ အရည်အသွေးမြင့်ဘာသာပြန်ဂိမ်းနှင့်စကားပြောကစားသူများသည်ဒဏ္legendaryာရီဆန်ဆန်လုပ်ဆောင်ချက်များ၏အင်္ဂါရပ်များကိုခံစားရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်။
ထို့ကြောင့်၎င်း၏ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များကြောင့် CS သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူကြိုက်များမှုရရှိခဲ့ပြီးသူတို့၏အားလပ်ချိန်များတွင်ဤဂိမ်းကိုကစားရန်နှစ်သက်သည်။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လုံးဝလုံခြုံသော link တစ်ခုပေးခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီရန်သင်ဒီမှာရှိသည် CS 1.6 အခမဲ့။
အခမဲ့ Counter Strike 1.6 ကို Download!
ဒီမှာသင်လုပ်နိုင်တယ် ရြ counter-strike 1.6 ဘို့ စည် လစ်ဘရယ်
ဤစာမျက်နှာတွင်သင်လုပ်နိုင်သည် ရြ CS 1.6 ဗားရှင်း ဖြည့်ပါ ထည့်သွင်းရန် ။ အဲဒီမှာ ဥတု တစ်ခါတစ်ရံ XTCS Counter-Strike 1.6 ဗားရှင်း ဘို့ အခမဲ့ မရ။ XTCS 1.6 Final Release 2011 သည်နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်ခေတ်အမီဆုံးဗားရှင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် Counter Strike 1.6မရ။ ဤဗားရှင်းအသစ်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပုံစံ၊ ပိုသွက်လက်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများနှင့်အသံများပါ ၀ င်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်ဂရပ်ဖစ်များကြောင့်ဂိမ်းသည်ယခင်ဗားရှင်းများထက်များစွာပိုမိုစွမ်းဆောင်သည် CS 1.6မရ။ ဒီဂိမ်းကို Windows တစ်ခုတည်း operating system အတွက်ရည်စူးသည်။ အရေးကြီးဆုံးအရာသည် Windows ဗားရှင်းအားလုံးတွင်အလုပ်လုပ်သည်။
Counter Strike ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်လူသိများသောသေနတ်ပစ်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ CS တွင်အကောင်းဆုံးအခြေအနေများ၊ အရည်အသွေးမြင့်မြေပုံများနှင့်ဂရပ်ဖစ်များပါရှိပြီး၎င်းသည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းပထမဆုံးလူကြည့်အများဆုံးအွန်လိုင်းသေနတ်သမားများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်လာသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, ဆိုင်ရောင်းခုံရှည် သပိတ် nu နှုန်းထားများ ဥတု de ရေနွေးငွေ့ မြင့်မားသောဖြစ်ကြသည်။
ဒီမှာ configuration file ကို download လုပ်ဖို့ link တစ်ခုတွေ့နိုင်ပါတယ် counter-strike ၁.၆ ။ သို့သော် PC အတွက်ဤ counter strike download သည်မြေပုံများ၊ အသံများ (သို့) အပိုတပ်ဆင်မှုများမပါဝင်ပါ။
သင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒေါင်းလုပ် ဆိုင်ရောင်းခုံရှည် သပိတ် 1,6 ဘို့ စည်အခမဲ့ ဤရိုးရှင်းသောအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏စာမျက်နှာပေါ်တွင်ခလုတ်တစ်ခုရှိပါသည် ဆိုင်ရောင်းခုံရှည် သပိတ်6download အခမဲ့
ကိုနှိပ်ပါ cs ရြ6şi မင်းစပြီ ဥတု
ဒေါင်းလုပ် ဆိုင်ရောင်းခုံရှည် သပိတ် configuration file ကိုသင့်ကွန်ပျူတာထဲသို့သိမ်းဆည်းရန်မိနစ်အနည်းငယ်သာကြာလိမ့်မည် (သင်၏အင်တာနက်အမြန်နှုန်းပေါ် မူတည်၍)
ဖိုင်၏တပ်ဆင်မှု (configuration) ကိုဖွင့်ပြီးမီတာ ၆ ကိုအပြီးသတ်တပ်ဆင်ပါ
တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးပါကစားပွဲခုံပေါ်တွင်တန်ပြန်သပိတ်မှောက်သည့်ဖြတ်လမ်းဖိုင်ကိုဖွင့်ပြီး CS6ကိုစတင်ကစားပါ
မှတ်ချက် - Browser တွင် CS installation ဖိုင်နှင့်အတူဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးထည့်သွင်းထားသောအပိုပရိုဂရမ်များသို့မဟုတ် application များမရှိပါ။ ဤသည်အခြားမလိုချင်တဲ့ applications များနှင့်အတူရိုးရှင်းတဲ့တိုက်ရိုက် download link ကိုဖြစ်ပါတယ်။
Counter-Strike 1.6 configuration file သည် game အပြောင်းအလဲများ၊ single playerer game mode အတွက်ကစားသမား၏ bot (CPU player's) နှင့် game's server များကိုရှာဖွေရန်အလုပ်လုပ်နေသော server ၏ browser မှကာကွယ်ထားသည်။ ဆိုင်ရောင်းခုံရှည် သပိတ် ဒေါင်းလုပ် Windows ကို 10 အရည်အသွေးမြင့် CS 1.6 ဗားရှင်းဖြစ်ပြီးဆိုလိုသည်မှာအမှားအယွင်းများ (သို့) အမှားများမရှိပါ။
မှတ်စု: သင်ကူးယူနိုင်သည် ဆိုင်ရောင်းခုံရှည် သပိတ် 1.6 download, PC များအတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ အကယ်၍ သင်ဤအရာကိုပြုလုပ်ပါကသင်၏မူလမိတ္တူနှင့်ဤမိတ္တူရှိသည်ဟုသင်ပြောဆိုသည် ဥတု မဟုတ်တဲ့ ရနှေးငှေ့ ဆိုင်ရောင်းခုံရှည် သပိတ် ၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်မျှဝေ ဆိုင်ရောင်းခုံရှည် သပိတ် download, ဘို့ ပီစီအူလ် အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်၎င်းသည်မမှန်ပါ။
ဘို့ ဒီ ဂိမ်း၊ သင့်တော်တဲ့ကွန်ပျူတာစနစ်လိုအပ်ချက်တွေရှိဖို့အကြံပြုထားတယ်။ အသုံးပြုရန်အကြံပြုလိုသောအကောင်းဆုံးစနစ်များမှာ Windows 10, Windows 8 or 8.1, 7, XP နှင့် 2000, ME, 98, 95 တို့ဖြစ်သည်။ ဆိုင်ရောင်းခုံရှည် သပိတ် ပြည့်သော ဂိမ်း download, သူတို့ကိုအပေါ်အလွယ်တကူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ပရိုဆက်ဆာနာရီမြန်နှုန်း၊ နာရီအမြန်နှုန်း 1200 GHz နှင့်အထက်
128 MB သို့မဟုတ်ပိုကောင်းသောဗီဒီယိုကဒ်။
စီးရီးအကြောင်း ဆိုင်ရောင်းခုံရှည် သပိတ်
ဒီစာပိုဒ်မှာငါ CS ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုပြောမယ်။ Counter strike သည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် Minh“ Gooseman” Le နှင့် Jess Cliffe တို့၏ Half-Life ပြုပြင်မွမ်းမံမှုအဖြစ်ပထမဆုံးဖြန့်ချိခဲ့သော online first person shooter အက်ရှင်ဂိမ်းဖြစ်သည်။ Counter-Strike Microsoft Windows platform တွင် Valve မှစတင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ မကြာခင်မှာပဲဒီဂိမ်းဟာကမ္ဘာပေါ်မှာလူကြိုက်အများဆုံးသေနတ်ပစ်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့၊ ဒါကမြန်ဆန်တဲ့အွန်လိုင်းနဲ့အသင်းကို ဦး တည်တဲ့ကစားနည်းပါ၊ ကစားသမားများသည်အကြမ်းဖက်သမားများသို့မဟုတ်တန်ပြန်အကြမ်းဖက်သမားများဖြစ်စေရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ နှစ်သင်းစလုံးသည်တစ်ပွဲနိုင်သည်အထိအပြန်အလှန်တိုက်စစ်ဆင်ကစားကြသည်။ ရန်သူအဖွဲ့မှအဖွဲ့ဝင်အားလုံးကိုသတ်ရန်စီမံသောအဖွဲ့သည်အနိုင်ရသူဖြစ်လာသည်။ ဒုတိယ၌ကစားရန်ကွဲပြားသောအခြေအနေများရှိသည် Counter-Strikeလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ဓားစာခံကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပေါက်ကွဲစေတတ်သောဗုံး
ထို့ပြင်ဂိမ်းတွင်ဥပမာ၊ မြို့ပြ၊ အာတိတ်၊ တောနက်နှင့်သဲကန္တာရကဲ့သို့သောပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုး၌နေရာယူသောကွဲပြားသောမြေပုံများစွာရှိသည်။ ဒါကကစားသမားတွေကိုသူတို့ကစားချင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးကိုရွေးချယ်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးတယ်။ ဒါပေမယ့်လွှတ်တင်ကတည်းက Counter-Strike 1.6ဂိမ်းများမှမြေပုံများကိုထည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းမပြုလုပ်ပါ။
ကစားသမားသည်ဂိမ်းတွင်ဖော်ပြထားသောလက်နက်အမျိုးမျိုးမှရွေးချယ်နိုင်သည်။ ကစားသမားများသည်ဓားများမှရိုင်ဖယ်များနှင့်စက်သေနတ်အထိလက်နက်အမျိုးမျိုးမှရွေးချယ်နိုင်သည်။ လက်နက်တစ်ခုရွေးချယ်ရာတွင်ကစားသမားသည်အသုံးပြုမည့်လက်နက်များမည်မျှကျေနပ်အားရကြောင်းပြန်လည်စဉ်းစားသင့်သည်။ လက်နက်ရွေးချယ်ရန်အခြားအကြောင်းပြချက်မှာ၎င်းသည်ကြည့်ကောင်းသည် (သို့) အေးလွန်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခြားစံသတ်မှတ်ချက်များမှာလက်တွေ့ဘ ၀ တိုက်ခိုက်ရေးအခြေအနေများတွင်မည်သည့်လက်နက်များအသုံးပြုမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရာတွင်လက်တွေ့ကျသည်။
Counter Strike ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းများအနက်၊ Counter-Strike 1.6ဂိမ်းသည်အဓိကအကြောင်းအရာအဆင့်မြှင့်တင်မှုဖြစ်ပြီးဗားရှင်းနံပါတ်သည်ယခုအခါလူကြိုက်များပြီးမူလစီးရီး၏ကျန်စီးရီးများနှင့်ကွဲပြားစေရန်အသုံးပြုသည်။ ဒီမှာအလွယ်တကူဒေါင်းနိုင်ပါတယ် un ဂိမ်း de configure ဘို့ ပီစီအူလ် ဂိမ်းကိုသင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ပါ။
အခုအချိန်မှာ CS 1.6 ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင် CS game ၏လူသိများဆုံးသောဗားရှင်းဖြစ်ကာ၎င်းကိုကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများရှိလူတို့တွင်အများအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ယခုပင်လူများသည်ဤဂိမ်းအတွက်ပြိုင်ပွဲများကိုစီစဉ်နေကြသည်။ သင်ဒီမှာတွေ့နိုင်ပါတယ် https://www.game.tv/find-tournaments/-counter-strike-1.6-tournaments
Counter-Strike 1.6 ၂၀၀၃ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်တွင်ပထမအကြိမ်ပြန်လည်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ဤဂိမ်းဗားရှင်းတွင်အဟောင်းများမှလုပ်ဆောင်ချက်များစွာပါ ၀ င်သည်။
Counter Strike 1.6 သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးသေနတ်သမားများအနက်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်အပြောင်းအလဲများနှင့်ဗားရှင်းအသစ်များစွာရှိသည်။ ဂိမ်း၏ဂရပ်ဖစ်၊ အမှားအယွင်းများနှင့်အခြားဖွံ့ဖြိုးရေးဒြပ်စင်များကိုလူကြိုက်များမှုတိုးပွားစေရန်ဗားရှင်းများနှင့်ပုံမှန်မွမ်းမံသည်။
ဂိမ်းကအရမ်းအိုမင်းပေမဲ့လူကြိုက်များတာကတော့အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်မြင့်မားပါတယ်။ လူတို့သည်ဗားရှင်းအသစ်ကိုသာမကဒေါင်းလုတ်လုပ်နေကြသည် CS ရြ ဖိုင်ဒါပေမယ့်လည်းအသက်အကြီးဆုံးပါ။ CS 1.6 လူကြိုက်အများဆုံးတစ် ဦး ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည် တင် CS ဂိမ်း။ ဒီမှာသင်လုပ်နိုင်တယ် ရြ ဆိုင်ရောင်းခုံရှည် သပိတ် ရေနွေးငွေ့ ဥတု အခမဲ့ ။ သင်ထိုသို့မပြုလုပ်သေးပါက၊ အထက်ဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသောရိုးရှင်းသောအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။
ဒီမှာနောက်ဆုံး XTCS နောက်ဆုံးဗားရှင်းတွေထဲက download လုပ်နိုင်ပါတယ် counter-strike 1.6 ။
မင်းဖတ်နိုင်တယ် ဆိုင်ရောင်းခုံရှည် သပိတ် download, 1.6 အခမဲ့ ဖိုင်ဖော်ပြချက် ဗားရှင်း ဖြည့်ပါ ဒီမှာ။
အမျိုးအစားအမျိုးအစား: လှုပ်ရှားမှု / လူတစ် ဦး သေနတ်သမား
ဂိမ်း mode များ: ကွန်ယက် (အင်တာနက်၊ ဒေသတွင်းကွန်ယက်၊ ထူးခြားသော bot)
Counter Strike 1.6 download, ဗားရှင်း ဖြည့်ပါ ပုံမှန်မြေပုံများ၊ အသံများနှင့်ပုံစံများသည်ဂိမ်း၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းတွင်ထည့်သွင်းထားသောသို့မဟုတ်ပြုပြင်ထားသောအသံအသစ်များသို့မဟုတ်မြေပုံများမရှိပါ cs ဥတု အခမဲ့ install လုပ်ပါ ဖိုင်။ Moded Counter Strike ဗားရှင်းများကိုဤနေရာတွင်လည်းဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည် https://csdownload.net/counter-strike-1-6-indir/
သင်ပြင်ဆင်ထားသောမြေပုံများ၊ အသံများ၊ ဂရပ်ဖစ်များနှင့်နောက်ဆုံးဂိမ်း attribute များကိုသင်လိုချင်လျှင်သင်လိုအပ်သောတိကျသောမြေပုံများ၊ အသံများနှင့်အခြားအင်္ဂါရပ်များကိုသင်ရှာဖွေသင့်သည်။
Counter-Strike 1.6: XTCS၊ Xtreme Counter-Strike 1.6၎င်းသည်နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်ခေတ်အမီဆုံးဗားရှင်းဖြစ်သည် CS 1.6မရ။ ဒါကအံ့သြဖွယ်ဗားရှင်းပါ CS 1.6ပို၍ လက်တွေ့ကျသောဂရပ်ဖစ်များ၊ အသံများ၊ လက်နက်များ၊ အရာဝတ္ထုများ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောပုံစံငယ်များနှင့်အခြားအဖိုးတန်အပ်ဒိတ်များစွာပါ ၀ င်သည်။
XTCS ကို download လုပ်လိုလျှင် Counter-strike 1.6 အခမဲ့၊ သင်အခမဲ့ XTCS download ကိုနှိပ်ပါ CS 1.6 အထက် ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ XTCS ဖွဲ့စည်းမှု Counter-strike 1.6 FPS configuration နှင့်နောက်ဆုံးပေါ် build version တို့ပါဝင်သည်။ တပ်ဆင်ခြင်း CS 1.6: XTCS သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်အကောင်းဆုံးဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုအာမခံပါသည်။
XTCS အက္ခရာများ Counter-Strike 1.6 နောက်ဆုံးပစ်လွှတ်:
နောက်ဆုံးပေါ် anti-slip ထိုးဆေးများနှင့်လိုက်ဖက်သည်
နောက်ဆုံးပေါ်ပါဝင်သည် CS 1.6 စက်ရုပ်များ
အင်္ဂလိပ်၊ အယ်လ်ဘေးနီးယန်း၊ ဘူဂေးရီးယား၊ ချက်၊ ဒိန်းမတ်၊ ဂျာမန်၊ ဒတ်ခ်ျ၊ ဖင်လန်၊ ပြင်သစ်၊ ဂရိ၊
သူကသူ့လက်ပုံစံနှင့် texture ကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်
အဟောင်းကို fix နှင့်အသစ်သော installer ကိုလက်တွေ့ကျကျအသံများပါဝင်သည်နေကြသည်
တူရိယာဆန့်ကျင် slowhack ပါဝင်သည်
၎င်းကိုအင်တာနက်နှင့် LAN တွင်ဖွင့်နိုင်သည်
Steam GCFs မှ 100% သန့်ရှင်းသောထုတ်ယူခြင်း (ဂိမ်း cache ဖိုင်များ)
ထပ်မံထည့်သွင်းခဲ့သည် Counter-Strike 1.6 စက္ကူ
warzone download လုပ်ပါ
COUNTER-STRIKE 1.6 WARZONE MODULE
Counter-strike 1.6Warzone ကို Franchise ပိုင်ရှင် Valve မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင်စတင်ဖြန့်ချီခဲ့ပါသည် Counter-Strike၎င်းသည်အခြားဗားရှင်းများနှင့်အနည်းငယ်ကွဲပြားသည် Counter-Strike 1.6မရ။ CS: warzone ၏အခြေခံသဘောတရားရှိသည် CS 1.6ဒါပေမယ့်ပိုမိုမြင့်မားတဲ့ resolution နဲ့ဂရပ်ဖစ်တွေနဲ့။ ၎င်းသည်အပိုဆောင်းစစ်တပ်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများနှင့်အနည်းငယ်ပြုပြင်ထားသည်။ ၎င်းစတင်ထုတ်လုပ်စဉ်ကတည်းကသေနတ်ပစ်ဂိမ်းကိုလူအများနှစ်သက်ခဲ့ကြသည် CS 1.6 Warzone ။ Counter-Strike 1.6 Warzone ကိုစာမျက်နှာပေါ်ရှိ link ကို သုံး၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ website csdownload.net မှ download ရယူနိုင်ပါသည်။ အခမဲ့ download ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ CS 1.6 warzone အထက်က free Warzone ပါ CS 1.6 exe ဖိုင်ကိုသင်၏ PC တွင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါလိမ့်မည်။ Warzone ကိုအခမဲ့ download လုပ်ပြီးပါ CS 1.6 မည်သည့်အမှားများနှင့်ပြဿနာများမရှိဘဲ၎င်းကိုသင်အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ပေးထားသော link ဖြစ်သည် CS 1.6 Free Warzone သည်ပုံမှန်မဟုတ်သောဗိုင်းရပ်စ်များ၊ ကြော်ငြာများ၊ ရှုပ်ထွေးသောကစားနည်းများနှင့်အခြားဖျက်ခြင်းအက်ပလီကေးရှင်းများမှကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်။
ဒါဟာအွန်လိုင်း, LAN နှင့်စက်ရုပ်နှင့်အတူကစားနိုင်ပါတယ်;
နှင့်အလုပ်လုပ်သည် Windows 7, 8, 10, XP, Vista;
client သည် P47 P48 ဆာဗာများကိုလည်းဆက်သွယ်နိုင်သည်။
တပ်ဆင်ထားသောအရွယ်အစား 177 MB
နောက်ဆုံးပေါ်ထည့်ပါ CS 1.6 စက်ရုပ်များ၊
နောက်ဆုံးပေါ် AMX Mod X v1.8.2 ပါဝင်သည်။
တင်ရန် Counter-Strike 1.6 CS: GO mod အခမဲ့ဖြစ်သည်။
Counter-Strike 1.6 CS: GO mode သည် GAME ၏ပြုပြင်ထားသောဗားရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည် CS 1.6 ဘယ်ကစားသမားတွေလဲ CS 1.6 ငါဂိမ်းကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ် Counter-Strike: ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထိုးစစ် ဤအထူးသွင်ပြင်သည် CS: GO နှင့်အလုပ်လုပ်ပုံနှင့်ဆင်တူသည် Counter Strike 1.6မရ။ ၎င်းကို main game မှပုံစံများ၊ မြေပုံများ၊ အသံများ၊ အရေခွံများ၊ spoilers များနှင့် textures များဖြင့်တည်ဆောက်သည် Counter-Strikeသတ်မှတ်ချက်နိမ့်သောမည်သည့်ကွန်ပျူတာတွင်မဆိုအကောင်းဆုံးကြည့်ရှုခံစားမှုကိုပေးနိုင်ရန် GO ။ အပြောင်းအလဲအနည်းငယ်ရှိခဲ့သည် CS 1.6 CS: GO သည်ရှာဖွေရန်နှင့်အကဲဖြတ်ရန်ခက်ခဲသောအရာဖြစ်သည်။
အခမဲ့ Counter-Strike 1.6 CS: GO download ကိုငါတို့ page မှာဒီမှာရနိုင်ပါတယ်။ ဤစာမျက်နှာတွင်တိုက်ရိုက်ပေးသော link မှတဆင့်၎င်းကို download လုပ်နိုင်သည်။ ကြည့်ပြီးရင် Download လုပ်နိုင်ပါတယ် Counter-Strike 1.6 ကျွန်ုပ်တို့၏ website တွင် CS: GO ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ ယနေ့အခမဲ့ဂိမ်းကိုရယူပါ။
တင်ရန် Counter-Strike 1.6 CSGO အနည်းဆုံးစနစ်လိုအပ်ချက်များ
မှတ်ဉာဏ် Ram က de 512 MB ကို
1 core နှင့်အတူ 1 Processor ကို
64MB Video Ram အမှတ်တရ
2 GB disk သိုလှောင်မှု
ဤမုဒ်တွင်တည်းဖြတ်ထားသည် CS 1.6 CS: GO နှင့်ဆင်တူသောပုံစံများကိုကြည့်ပါ
ဤတည်းဖြတ်ထားသော mode တွင်ဂိမ်း၏ Global Offensive version နှင့်တူညီသောအသံများပါရှိသည်။ ရေဒီယို၊ လက်နက်အသံ၊ အသံအကျိုးသက်ရောက်မှုများ (မြေပုံအသံများစသည်ဖြင့်)
CS: အစမှာ GO ဂီတဂိမ်း
ဤထုတ်ဝေမှုတွင်ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ထားသောမြေပုံနှင့်ပုံသဏ္ဌာန်သည် CS: GO နှင့်ဆင်တူသည်။ ၎င်းသည်ဂိမ်း၏မူလမြေပုံများအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည် (de_dust2, de_inferno, cs_assault, etc)
ဂိမ်း၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုလည်းပြောင်းလဲပြီးအဓိကအားဖြင့် CS: GO ဗားရှင်းနှင့်ဆင်တူသည်
CS: GO သေနတ်နှင့်ခဲယမ်းမီးကျောက်များဈေးဝယ်မီနူး
သမိုင်း ဆိုင်ရောင်းခုံရှည် သပိတ်မှောက်:
Counter-strike ၎င်းသည်သမိုင်းတွင်အကျော်ကြားဆုံးပထမဆုံးသေနတ်ပစ်ဂိမ်းအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ရှည်လျား။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးထူးခြားသောကစားနည်းများရှိသည်။ သင်တို့အများစုသည်သမိုင်းအကြောင်းမသိကြပေ Counter-strikeတစ်ချိန်လုံးကစားခဲ့ဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းတွေထဲကတစ်ခုပါ။ ဂိမ်းကစားသူတစ် ဦး အနေနှင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အကြောင်းသိရန်လိုသည် Counter-strike ပြီးပြည့်စုံသောဇာတ်ညွှန်းတစ်ခုအနေနှင့်ကောင်းမြတ်သောကစားသူသည်အချိန်တိုင်းလူကြိုက်အများဆုံး၊ ဒေါင်းလုပ်များနှင့်အများဆုံးကစားခဲ့သည့်ဗီဒီယိုဂိမ်းများထဲမှတစ်ခုသို့လျင်မြန်စွာဆုတ်သွားသည်။ ၎င်းသည် ၁၇ အတွက် beta ကိုယူခဲ့သည်မှာအလွန်ရှင်းလင်းသောအမှန်တရားဖြစ်သည် Counter-strike ဂိမ်းလောကတွင်လွတ်လပ်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်ရှင်သန်ရန်။ ဂိမ်းဟောင်းတစ်ခုဖြစ်နေသော်လည်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားများနှင့်သန်းပေါင်းများစွာသောလူများသည်ကစား။ ပျော်ရွှင်နေဆဲဖြစ်သည် Counter-strike.
၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ လွန်ခဲ့သော ၂၁ နှစ်ခန့်ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဆို့ရှင်များသည် Half-Life ဟုခေါ်သောပထမလူသေနတ်သမားဂိမ်းကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ Valve Corporation သည်ရှေ့ဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်သည် Counter-Strikeမရ။ ၎င်းသည်ကွန်ပျူတာဂိမ်းများကိုထုတ်လုပ်သူနှင့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သောအမေရိကန်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ Sierra Studios သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကစားသမားများ၊ ပေါက်ကွဲသံများနှင့်အတူအချိန်တစ်ဝက်ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်။ Counter-strike ၎င်းသည်ကစားသူများအကြားအလွန်လျင်မြန်စွာလူကြိုက်များလာခဲ့ပြီးအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးသည်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ပြီးပရိုဂရမ်မာများသည်တစ် ဦး ချင်း mods များပြုလုပ်လာကြသည်။
ကနေဒါပရိုဂရမ်မာ Minh Le နှင့်သူ၏ချစ်သူ Jess Cliffe တို့သည် Half-Life mode ၏ beta version ကိုဖန်တီးနေသည်။ Counter-Strikeမရ။ Half-Life ၏ပထမ beta ဗားရှင်းကိုတီထွင်ရန်၎င်းတို့အား coding ၏တစ်လနှင့်တစ်ဝက်ကြာခဲ့သည်။
Min Le နှင့် Jess Cliffe တို့သည် betas ဖွံ့ဖြိုးရန်ဆက်လက်ရုန်းကန်ခဲ့ပြီး CS အတွက် website တစ်ခုကိုလည်းဖန်တီးခဲ့သည်။ အစပိုင်းမှာမြေပုံလေးခုနှင့်လက်နက်ကိုးခုသာရှိသည် Counter-Strikeသို့သော်နာမည်ကျော်ဆက်တင်ကရှိနေသေးသည်။ လူများသည်အကြမ်းဖက်သမားများသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်သမားများအဖြစ်ရွေးချယ်ရန် 5v5 ချီတက်ပွဲများကိုကစားခဲ့ကြပြီးယနေ့ထိဤအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ အချိန်ပို, Counter-Strike ၎င်းသည်ပိုမိုအာရုံစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပြီးလူများသည်ဂိမ်းကိုနှစ်သက်လာကြသည်။
Pa Valvei အဆို့ရှင် သို့:
ကျော်ကြားမှုမြင့်တက်လာမှုကြောင့်ဖြစ်သည် Counter-Strike ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင်ပဉ္စမမြောက် beta ကိုဖြန့်ချိပြီးနောက် video game developer Valve သည်သူတို့၏မျက်လုံးကိုဖမ်းပြီး Le နှင့် Cliffe ကိုငှားရမ်းခဲ့သည်။ Valve သည် Counter-Strikeprogrammer Minh Le နှင့် Jess Cliffe တို့သည် Valve နှင့်စတင်လက်တွဲခဲ့ကြသည်။ Counter-Strike ၂၀၀၀ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင် PC အတွက်နောက်ဆုံးဖြန့်ချိခဲ့ပြီး၎င်းသည်စီးရီး၏တရားဝင်စတင်ခြင်းဖြစ်သည် Counter-Strike .
ပထမဆုံးတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည် Counter-Strike ၎င်းတွင်နာမည်အကြီးဆုံးမြေပုံနှစ်ခုဖြစ်သော Assault (cs_assault) နှင့် Cobblestone (de_cabble) တို့ရှိခဲ့ပြီးကွင်းပြင်၌သာကစားခဲ့သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်၎င်းတွင်ကြီးမားသောစာသားပါရှိသော်လည်း PC အတွက်တန်ပြန်သပိတ်၏တရားဝင်စီးရီးတစ်ခုစတင်ပြီးနောက်၎င်းသည်လူကြိုက်များမှုကိုခေါက်ရိုးကျိုးစေခဲ့သည်။
၏အသိုင်းအဝိုင်း Counter-Strike ဂိမ်းကစားသူပိုများလာသည်နှင့်အမျှပိုကြီးလာပြီးပိုကြီးလာသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ကစားခဲ့သည့်အတိုင်းကျော်ကြားမှုသည်ထူးခြားလာသည်။ ကစားသူအများအပြားသည်ယခင်ကရှိခဲ့သည်၊ သို့သော် Counter-Strike ၎င်းသည်အခြားအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတစ်ပွဲတည်း၌ရရန်လွယ်ကူသည်။ သူငယ်ချင်းများ (သို့) သူစိမ်းများနှင့်ဂိမ်းတစ်ခုကစားရန်ကွန်ပျူတာရှေ့တွင်နာရီပေါင်းများစွာကြာအောင်မလိုအပ်ပါ။ လူတွေရနိုင်တဲ့အချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးမိနစ်အနည်းငယ်ဒါမှမဟုတ်ရက်ပိုင်းကစားနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ကစားရန်ကစားရန်လွယ်ကူပြီးထူးခြားသော်လည်းကျွမ်းကျင်ရန်ခက်ခဲသည်။ ၎င်း၏ထူးခြားသောစတိုင်နှင့်စိန်ခေါ်မှုသဘောသဘာဝကြောင့်၎င်းသည်ကစားသမားများကြားရေပန်းစားလာသည်။ ၎င်းသည်ကျွမ်းကျင်သူများအတွက်ပြုလုပ်ထားသောဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုဖန်တီးခဲ့ဖူးသမျှအလွှမ်းမိုးဆုံး multiplayer ဂိမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခေတ်ပြိုင်ကမ္ဘာတွင်စက်ပြင်များစွာကိုသင်မြင်နိုင်သည် Counter-Strike အကောင်အထည်ဖော်သည်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံး၎င်း၏ကျော်ကြားမှုမှတဆင့်ဖြန့်ဝေရန်ကူညီခဲ့သည်။
ဗားရှင်းနှင့် နောက်ဆုံးသတင်း ale Counter-Strike:
CS ၏မကြုံစဖူးတိုးတက်မှုနှင့်လူများအားဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အလားအလာသည် developer များအားဤဂိမ်းကိုပိုမိုစိတ်ဝင်စားပြီးလူတို့အားဆွဲဆောင်ရန်ပိုမိုလုပ်ဆောင်စေသည်။ လူတွေရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကစိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေဖြစ်လာပြီးပရိုဂရမ်မာတွေကစိတ်ကူးတွေကိုလက်တွေ့အဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်လိုက်ကြတယ်။ Valve ကော်ပိုရေးရှင်းသည်၎င်း၏ Anti-Cheat (VAC) စနစ်ကို ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဤစနစ်သည်လိမ်လည်ရန် (သို့) hack ရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်ဖြစ်ပြီးကစားသမားတစ် ဦး သည်ကြိုးစားပါကချက်ချင်းတားမြစ်ခံရလိမ့်မည်။ Valve သည်အကြမ်းဖက်သမားများနှင့်အကြမ်းဖက်သမားများအတွက်မြေပုံအသစ်များနှင့်လက်နက်များကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည် Counter-Strike ၂၀၀၃ တွင်ဗားရှင်း ၁.၁
Valve, Ritual Entertainment နှင့် Turtle Rock Studios တို့ကတီထွင်ခဲ့သည် Counter-Strike: Condition Zero ကို ၂၀၀၄ တွင် Sierra နှင့်အတူကြားရရန်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် single-player နှင့် multiplayer mode နှစ်ခုလုံး၏ထူးခြားချက်များရှိသည်။ ပရိုဂရမ်မာများသည် Deleted Scenes ဟူသောခေါင်းစဉ်တစ်ခုတည်းဖြင့်မစ်ရှင်နောက်သို့လိုက်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည်လည်းဂရပ်ဖစ်ကိုတိုးတက်စေသော်လည်း၎င်းသည်ဆိုးရွားစွာပြုမူခဲ့သည်။ ကစားသမားအများစုသည်ထိုက်တန်သောအရာကိုမတွေ့ဘဲဗားရှင်းအသစ်သို့ပြောင်းရွှေ့ရန်စိတ်မ ၀ င်စားကြပါCounter-Strike မရ။ သူတို့သည်ဂိမ်းအသစ်ကို မကျေနပ်၍ အဟောင်းကိုပိုနှစ်သက်ကြသည် Counter-Strike ကပ်ရောဂါ Counter-Strike: အခြေအနေသုည အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ Valve ကကျွန်ုပ်တို့အားမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည် Counter-Strike ca Counter-Strikeအရင်းအမြစ်၊ နှင့် Counter-Strike၂၀၁၀ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထိုးစစ်
အကြိမ်ကြိမ်အကြိမ်ကြိမ်နှင့်မွမ်းမံမှုများထောင်ပေါင်းများစွာပြီးသောအခါအဆို့ရှင်သည်ယနေ့ကစားပွဲကိုအသွင်ပြောင်းလဲရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။ သူတို့ကအဲဒါကိုဆက်လုပ်ခဲ့တယ် Counter-Strike CS သည်အကောင်းဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းကိုတင်မကဘဲကမ္ဘာပေါ်မှာနှစ်ရှည်လများစောင့်မျှော်ခဲ့ရတဲ့အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်စေတဲ့ပရိသတ်များနှင့်အသိုင်းအဝိုင်း၏ဆန္ဒများအရဖြစ်သည်။ မူလကတည်းကနှစ်ဆယ့်တစ်နှစ်ရှိပြီ Counter-Strikeအသက်ရှင်နေဆဲဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသန်းပေါင်းများစွာသောလူများသည် CS ကိုကစားရန်နှစ်သက်ဆဲဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ၎င်းသည်အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းတို့အကြားပြီးပြည့်စုံသောဟန်ချက်ညီသောကြောင့်ပြီးပြည့်စုံသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Counter-strike ၎င်းသည်သင်ယူရန်လွယ်ကူသောကစားနည်းဖြစ်သော်လည်းကျွမ်းကျင်ရန်ခက်ခဲသည်။ ၎င်းကိုအနာဂတ်မျိုးဆက်များအတွက်ကစားလိမ့်မည်။
အကြောင်း Counter-Strike 1.6
အကြောင်း Counter-Strike 1.6:
CS 1.6 သည်အက်ရှင်နှင့်စွန့်စားမှုအပြည့်ရှိသောဒဏ္legendaryာရီဆန်သောပထမဆုံးသေနတ်သမားဂိမ်းဖြစ်ပြီးအကျော်ကြားဆုံးဗားရှင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် Counter-Strikeမရ။ ၎င်းကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်တွင် Valve Corporation မှတီထွင်ခဲ့ပြီး STEAM မှဖြန့်ချိခဲ့သည်။ သူသည်လူအများကြားတွင်လျင်မြန်စွာကျော်ကြားလာပြီးကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှသူ၏ပရိသတ်များကိုစုရုံးစေခဲ့သည်။ ၏အသိုင်းအဝိုင်း CS 1.6 နေ့စဉ်နဲ့အမျှပိုပိုပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကလူတွေကစားနေကြတယ်
CS သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးနှင့်အကစားဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်မှာသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ ၎င်းသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကဖြန့်ချိခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုသိသော်လည်း Esports တွင်အမြင့်ဆုံးအဆင့်တွင်ကစားနေဆဲဖြစ်သည်။ သန်းပေါင်းများစွာသောလူတွေရှိနေသေးတယ် CS 1.6 သူတို့၏ PC တွင်လူထောင်ပေါင်းများစွာသည် web မှအခမဲ့ download လုပ်နေသည်။ ဒါ့အပြင်နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေမှာ CS 1.6 နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပလေ့ရှိပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကစားသမားများသည်ဤပွဲစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်ပါ ၀ င်သည်။ နိုင်ငံတကာကစားသမားများစွာသည်သူတို့၏နာမည်နှင့်ကျော်ကြားမှုကိုကမ္ဘာအနှံ့ရရှိခဲ့သည်။
ဒါဟာအမြဲတမ်းလူကြိုက်အများဆုံးပထမ ဦး ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး သေနတ်သမားဂိမ်းအတွက်ကစားသမားအကြမ်းဖက်အသင်း, အကြမ်းဖက်တန်ပြန်အဖွဲ့သို့ဝင်ရောက်သို့မဟုတ်ကြည့်ရှုဖြစ်လာသည့်အတွက်။ အသင်းတစ်ခုစီသည်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တစ်ခုရရှိရန်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြင့် ၄ င်း၏တာဝန်ကိုကျေပွန်ရမည်။ ဗုံးများချထားရန်သို့မဟုတ်ပိတ်ထားရန်သို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်သမားထံမှဓားစာခံများကိုလုံခြုံရန်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ရမည်။ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့သည်ဗုံးတစ်လုံးသယ်ဆောင်ကာနေရာတစ်နေရာတွင်နေရာချကာဂိမ်းကိုအနိုင်ရရန်ပေါက်ကွဲခြင်းမပြုမီဗုံးများကိုလက်နက်ဖျက်သိမ်းခြင်းမှအကာအကွယ်ပေးရန်အကြမ်းဖက်သမားဆန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့ကိုတိုက်ခိုက်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့သည်အကြမ်းဖက်မှုကိုတိုက်ဖျက်ခြင်းအားဖြင့်ဂိမ်းကိုအနိုင်ယူရန်ကျောက်တုံးများမပစ်ထားခဲ့ပါ။ ဓားစာခံမြေပုံများတွင်အကြမ်းဖက်သမားတန်ပြန်သူသည်ဓားစာခံများကိုဂိမ်းတစ်ခုအနိုင်ရရန်သိမ်းဆည်းရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ အကယ်၍ သူသည်ဓားစာခံများကိုအောင်မြင်စွာကယ်တင်နိုင်လျှင်သူသည်ဂိမ်းကိုအနိုင်ရရှိပြီးအချိန်ကုန်ဆုံးလျှင်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့သည်ထိုဂိမ်းကိုအနိုင်ရရှိသည်။
သိတယ် က de ce CS 1.6 ဤ အများဆုံး လူကြိုက်များ ဂိမ်း download CS လား
CS 1.6 ဗားရှင်းCounter-Strike ၎င်းတွင်ထူးခြားမှုနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းစေသောဆွဲဆောင်မှုရှိသောအင်္ဂါရပ်များနှင့် features များစွာပါ ၀ င်သောကြောင့်နာမည်ကြီးသည် Counter-Strikeမရ။ ဤဗားရှင်း Counter-Strike ၎င်းကိုကစားသမားများ၏စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်သာမန်လူထုအတွက်ပရိုဂရမ်မာများကအထူးတီထွင်ထားသည်။ Counter Strike တွင် multiplayer နှင့် single-player modes နှစ်ခုလုံးရှိသည်။ developer များသည်နည်းဗျူဟာအရမီးပွားများ၊ crosshairs များနှင့်စနိုက်ပါများပါ ၀ င်သောအမှတ်တံဆိပ်ဗားရှင်းအသစ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
ကစားသူများသည်ဗားရှင်းအသစ်တွင်ဓားများ၊ ရိုင်ဖယ်များ၊ ခန္ဓာကိုယ်ချပ်ဝတ်တန်ဆာများ၊ လက်ပစ်ဗုံးများ၊ စက်သေနတ်များနှင့်ဗုံးရှင်းလင်းရေးကိရိယာများအပါအ ၀ င်ကွဲပြားခြားနားသောနောက်ဆုံးပေါ်လက်နက်များရနိုင်သည်။ CS 1.6မရ။ ကစားသမားများသည်ဂိမ်း၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီလက်နက်များ ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။ ဤလက်နက်များသည်တကယ့်စစ်ပွဲတစ်ခုအတွက်သုံးသောတကယ့်လက်နက်များနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်၊ ထို့ကြောင့်ဤလက်နက်များသည်အေးမြသောအသံနှင့်ကစားသမားများကိုဆွဲဆောင်သည်။
ဗားရှင်းအသစ်များ Counter-Strike ၎င်းတွင်အရည်အသွေးမြင့်ဂရပ်ဖစ်များ၊ ပုံစံကောင်း၊ dynamic textures နှင့်အသံများပါ ၀ င်သည်။ မြေပုံများ CS 1.6 အခြားမည်သည့်ဗားရှင်းထက်မဆိုများစွာပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတိုးတက်လာသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာ၊CS 1.6 ဆေးများသည်ခက်ခဲသောကွန်ပျူတာစနစ်တစ်ခုဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါ၊ ၎င်းသည်ခက်ခဲသောကစားနည်းတစ်ခုမဟုတ်သောကြောင့်မည်သည့်ကွန်ပျူတာစနစ်နှင့်မဆိုဂိမ်းကိုလွယ်ကူစွာလည်ပတ်နိုင်သည်။ ၎င်းအပြင်၎င်းသည် Microsoft Windows Versions ဗားရှင်းအားလုံးနှင့်လိုက်ဖက်သည်။
ထိုမျှသာမက၊ Counter-Strike၎င်းသည်၎င်းတို့အားနေ့စဉ်ဘ ၀ ၌သူတို့၏ပြဿနာများကိုမေ့ပျောက်စေပြီးဂိမ်းကစားနည်းလောက၏မတူကွဲပြားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများအားကျော်ဖြတ်ရန်ကူညီသည်။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးပြန်ဖွင့်ပါ CS 1.6 သူငယ်ချင်းများနှင့်သူစိမ်းများနှင့်အတူအပျက်သဘောဆောင်သောအတွေးများကိုဖယ်ရှားပေးပြီးလူတို့အားပျော်ရွှင်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုပေးသည်။ အရည်အသွေးမြင့်ဘာသာပြန်ဂိမ်းနှင့်စကားပြောကစားသူများသည်ဒဏ္legendaryာရီဆန်ဆန်လုပ်ဆောင်ချက်များ၏အင်္ဂါရပ်များကိုခံစားရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်။
ရလဒ်အနေနှင့်၎င်း၏ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များကြောင့် CS သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူကြိုက်များမှုရရှိခဲ့ပြီးသူတို့၏အားလပ်ချိန်များတွင်ဤဂိမ်းကိုကစားရန်နှစ်သက်သည်။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လုံးဝလုံခြုံသော link တစ်ခုပေးခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီရန်သင်ဒီမှာရှိသည် CS 1.6 အခမဲ့